Apple inotangisa yechitatu beta yeIOS 9.3.2 yevagadziri | IPhone nhau
Apple yatanga maminetsi mashoma apfuura iyo iOS 9.3.2 yechitatu beta yevagadziri. Kuburitswa kwakauya pasingasviki vhiki mushure mekunge mushambadzi wekare beta aburitswa, mazuva matanhatu kuti anyatsoita. Iyo yekutanga yeruzhinji beta, inoenderana neyechipiri kune vanogadzira, yakavhurwa muna Kubvumbi 21, saka zvingangoita kuti ruzhinji beta beta rizovhurwa mangwana.
Beyond mukana wekumisikidza Night Shift uye nzira yekuchengetedza magetsi panguva imwe chete, tinogona kutaura kuti nhau dzese dzinosanganisira iOS 9.3.2 dzichange dziri, sekutaura kunoita Apple mune chero gadziriso, kugadzirisa kugadzikana, kuchengetedzeka uye kuvimbika kwesisitimu inoshanda, chimwe chinhu , kana ichizadzikiswa, inogamuchirwa nguva dzose.
Kunyangwe Apple isati yatumira kukoka kwechiitiko ichi, isu tatoziva kuti iyo Musangano Wepasi Pose Wekuvandudza (WWDC) 2016 ichaitwa pakati paJune 13 na17, iri mumwedzi unodarika nehafu chete. Sezvandambotaura pazviitiko zvakasiyana, vangangoita vashanduri veApple vari kutotarisa kune anotevera mavhezheni avo ese masisitimu anoshanda, ayo, kana pasina zvinoshamisira, ichave iOS 10, OS X 10.12, tvOS 10 uye watchOS 3. Kana iwe haikwanise kuwana chakakomba chengetedzo chikanganiso chekuvhara, iOS 9.3.2 inofanira kunge iri vhezheni vhezheni yeIOS 9 kuti iburitswe.
Semazuva ese, kutaura kuti hatikurudzire kuiswa kweiyi kana chero imwe software muchikamu chekuyedza nekuti chinhu chakajairika ndechekuti, kunyangwe isu tiri kutaura nezve vhezheni yatinogona kufunga kuti yakura, tinowana kukundikana kusingatarisirwe, senge kuvharwa kwesicelo, reboots kana kusagadzikana kwesisitimu. Kana iwe kunyangwe isu tichiyambira iwe ukasarudza kuiisa, usazeze kusiya chako chiitiko mune zvakataurwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 9 » Apple inoburitsa yechitatu beta yeIOS 9.3.2 yevagadziri
Hurumende yeIndia inomanikidza Apple kuwedzera bhatani bhatani pane iPhones kubva muna2017